Etu esi azụ ahia Ethereum Maka oke uru! - Mụọ ahia 2 Eprel 2021
Muta Nduzi ahia 2 nke 2021 Na ahia Ethereum!
Ihe mkpuchi ugbu a na-arụ ọrụ n'ọtụtụ ebe ijeri dollar - yana nyiwe n'ịntanetị na-enye gị ohere ịzụta ma ree ego dijitalụ na-adị mfe. Ọ bụ ezie na Bitcoin na-achịkwa ohere ahụ, Ethereum bụ nke abụọ kachasị ukwuu na usoro nke ahịa ahịa.
Nke a pụtara na saịtị ahia Ethereum bụ ebe obibi nke oke mmiri na azụmaahịa. Nke kachasị mkpa, ị ga-enwe nhọrọ nke ịzụ ahịa Ethereum megide mkpuchi ndị ọzọ dị ka Bitcoin, ma ọ bụ jiri ego fiat dị ka USD.
Na-achọ ịmatakwu banyere otu Ehereum trading si arụ ọrụ n'ezie? Ọ bụrụ otu a, anyị na-anabata gị ka ị gụọ Anyị Mụọ 2 Ahịa 2021 Nduzi Na Ethereum Trading.
Mara: Ethereum na-arụ ọrụ na ebe a na-eche echiche banyere itinye ego, yabụ, ọ dị oke mkpa na ị nwere nghọta zuru oke banyere ihe egwu dị na ya. Nke a bụkarị ikpe ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ iji leverage.
Kedu ihe bụ Ethereum?
Amalitere na 2015, Ethereum bụ ngọngọ ngọngọ nke na-enye ndị ọrụ ohere izipu ma nata uru na-enweghị ịchọrọ ndị ọzọ. Kama nke ahụ, netwọkụ dị n'okpuru na-agbasasịa, nke pụtara na ọ bụghị otu onye ma ọ bụ otu ihe na-achịkwa ya. Ethereum blockchain nwere ikike site na ego ya nke ndi obodo ya nwere ya - ma ana akpọ ya 'ETH'.
Dị ka Bitcoin, Ethereum nwere ezigbo uru ụwa. Nke ahụ bụ ịsị, ịnwere ike ịgbanwe akara Ethereum gị maka ego ego dị ka dollar US ma ọ bụ paụnd Britain. N'ihe ịchekwaa ETH gị, nke a ga-adị mkpa na obere akpa - nke ị nwere ike iwunye na desktọọpụ ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaka. Nke a na - enye gị ohere izipu akara Ethereum gị na onye ọrụ ọzọ, ya na azụmahịa na-ewere naanị 16 sekọnd.
Ethereum makwaara maka ịbụ ihe mbu mgbochi ngọngọ iji weta 'smart contracts' na ụlọ ọrụ cryptocurrency. Nke a na-enye ndị ọrụ ohere ịmepụta nkwekọrịta na ntụkwasị obi na-enweghị ntụkwasị obi. Usoro nkwekọrịta dị omimi na-arụ ọrụ nke ọma, koodu doro anya - yabụ na ndị ọzọ enweghị ike ịgbanwe ma ọ bụ kagbuo nkwekọrịta ahụ ozugbo etinyere ya.
Kedu uru na ọghọm nke ahia Ethereum?
Ethereum ka dị na mmalite - ka ọ bụ ohere ịbanye n'ahịa na ọnụahịa dị mma
Nwere ike ịzụ ahịa Ethereum megide mkpuchi ndị ọzọ
Ethereum nwekwara ike zụọ ahịa megide fiat ego dị ka USD na GBP
Azụmaahịa Ethereum na leverage, ma ọ bụ ire ere ya megide ego fiat
Oke nke saịtị ahia Ethereum - a na-achịkwa ụfọdụ n'ime ha
Amalitere iji kaadị akwụmụgwọ / kaadị akwụmụgwọ ma ọ bụ obere akpa
Dị ka cryptocurrencies niile, Ethereum bụ klas na-eche echiche nke ọma
I nwere ike idafu nnukwu ego ma ọ bụrụ na ịmaghị ihe ị na-eme
Bitcoin nwere ọtụtụ ego na azụmaahịa karịa Ethereum
Herezụ ahịa Ethereum: Ihe Ndị Bụ Isi
Ọ bụ ezie na teknụzụ dị n'okpuru na-akwado ngọngọ Ethereum abụghị ihe na-enweghị mgbanwe, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị mmadụ na-azụ ETH na-eme ya dị ka ụgbọ ala itinye ego. N'ọnọdụ ụfọdụ, ndị na-etinye ego ga-azụta Ethereum na nlele nke ijide ya ruo ọtụtụ afọ. Nke a dị na olile anya ire ya n'ọdịnihu na oke ọnụ ahịa dị elu karịa nke ha kwụrụ.
Site na nke a, ụfọdụ ndị na-achụ ego na-ahọrọ itinye aka na mkpụmkpụ azụmaahịa Ethereum. Nke a bụ ebe ị ga - azụ Ethereum megide ego ndị ọzọ. Nke a nwere ike ịbụ ihe mkpuchi dị ka Bitcoin ma ọ bụ Ripple, ma ọ bụ ego ụwa dị ka dollar US. Kedu ụzọ ọ bụla, ebumnuche kachasị bụ iji nweta uru nke mgbanwe mgbanwe n'etiti ego abụọ - otu n'ime ha bụ Ethereum.
Dị ka ọ dị na Forex, ahịa Ethereum dabere na 'ụzọ abụọ'. Dịka ọmụmaatụ, ịzụ ahịa BTC / ETH pụtara na ị na-atụgharị uche na ọnụego mgbanwe n'etiti Bitcoin na Ethereum. N'otu aka ahụ, site n'ịzụ ahịa ETH / USD, ị na-atụgharị uche na ọnụego mgbanwe n'etiti Ethereum na dollar US.
Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na a na-ere ETH / USD ugbu a na 213.45. Nke a pụtara na maka akara ọ bụla 1 Ethereum ị nwere, onye zụrụ ga-akwụ $ 213.45. Mgbanwe ego a ga-aga na nke abụọ site na abụọ, yabụ iji nweta uru ịkwesịrị ịchọpụta ụzọ ọ ga-esi na obere oge.
Iji mee nke a, ị ga - etinye ebe ma ọ bụ ire ere.
Ọ bụrụ na ịchọrọ na ọnụego mgbanwe ahụ ga-aga up, Mgbe ahụ ị na-atụgharị uche na ego dị na aka ekpe n'akụkụ aka ekpe nke na-abawanye na nke ego n'aka nri.
N'ihe atụ a, ego dị n'aka ekpe bụ Ethereum, yabụ na ị chere na ọ ga-abawanye na dollar US. Ọ bụrụ na ọ gafee, ọnụego mgbanwe ahụ ga-arị elu.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị mepee usoro ịzụta na ETH / USD na 213.45, wee mechie ya na 219.06, nke a ga-anọchite anya azụmaahịa na-aga nke ọma.
Ọ bụrụ n ’ị chere na ego dị n’aka nri ga-abawanye uru karịa ego n’aka ekpe, mgbe ahụ ị kwenyere na ọnụego mgbanwe ga-aga ala.
N'ihe atụ a, nke a pụtara na ị chere na dollar US ga-abawanye na uru megide Ethereum, yabụ ịkwesịrị ịtọ ahịa ire ere.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị mepee iwu ire ere na ETH / USD na 213.45, wee mechie ya na 201.96, nke a ga-anọchite anya azụmaahịa na-aga nke ọma.
Inweta isi gị na ịzụta na ire iwu nwere ike ịbụ ihe mgbagwoju anya na nke mbụ, yabụ ka anyị lelee ihe atụ ole na ole.
✔️ Ihe Nlereanya nke ahia Ethereum-to-Fiat
Iji kpochapụ alụlụ ahụ, ka anyị lelee etu azụmahịa Ethereum-to-fiat ga-adị.
Na-azụ ahịa ETH / USD
Ọnụ ego dị ugbu a bụ ụzọ 210.50
Think chere na Ethereum dị ala, nke pụtara na ọnụego mgbanwe ga-arị elu.
Dị ka ndị dị otú a, ị na-etinye iwu ịzụta maka ihe ruru $ 1,000
Mgbe e mesịrị na ụbọchị ahụ, ETH / USD na-abawanye ruo 215.30
Dị ka ị bụ ugbu a 2.28% na uru, ị kpebiri ịhapụ ụzọ gị site na ịtụkwasị ire ere
Dịka ị pụrụ ịhụ site n'elu, ị mere azụmaahịa nwa oge na-aga nke ọma na ETH / USD. Na oke $ 1,000, uru gị nke 2.28% mere ka ị nweta uru zuru ezu nke $ 22.80.
✔️ Ihe Nlereanya nke ahia Ethereum-to-Crypto
Otu ụzọ Ethereum-to-crypto pụtara na ị na-azụ ahịa Ethereum megide mkpuchi ọzọ. Nke a bụ ntakịrị ihe na-agbagwoju anya, ebe ọ bụ na a kwụghị ụzọ abụọ ahụ na ego ụwa dị ka USD. Kama nke ahụ, a na-akwụ ụzọ abụọ ọnụ naanị na mkpuchi.
Dị ka oghere Forex, ikike mgbanwe a na-akpọkarị ego n'aka nri. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ọnụahịa GBP / USD dị na 1.25, nke a pụtara na ị ga-enweta $ 1.25 US dollars maka 1 British paụnd ọ bụla. Dịka, ọ bụrụ na ọnụahịa BTC / ETH dị na 41.13, nke a pụtara na ị ga-enweta 41.13 Ethereum maka 1 Bitcoin ọ bụla.
Nke a bụ otu azụmahịa ga-esi rụọ ọrụ:
Na-ere ahịa BTC / ETH
Ọnụ ego dị ugbu a bụ ụzọ 41.13
I chere na Bitcoin dị oke ọnụ, nke pụtara na ọnụego mgbanwe ga-agbada
Dịka, ị na-etinye ahịa ire ere na oke $ 2,000
Mgbe e mesịrị na ụbọchị, BTC / ETH na-agbada na 35.90
Ka ị dị ugbu a 12.71% na uru, ị kpebiri ịhapụ ọnọdụ gị site na ịtụkwasị usoro ịzụta
Dịka ị pụrụ ịhụ site n'elu, ị mere azụmaahịa nwa oge na-aga nke ọma na BTC / ETH. Na oke nke $ 2,000, uru gị nke 12.71% mere ka ị nweta uru zuru ezu nke $ 254.20.
Etu esi ere ahia Ethereum?
N'ihe banyere ahia nke Ethereum, ihe ka ukwuu n'ime nke a dabere na njiri akụ dị na ya. N'echiche a, ị nwere nhọrọ abụọ n'aka gị - ịzụ ahịa na mgbanwe cryptocurrency, ma ọ bụ na onye na-ere ahịa CFD.
Trading Ethereum na Cryptocurrency Exchange.
Iji zụọ ahịa tokens na mgbanwe cryptocurrency, ị ga-eji ego dijitalụ kwụọ ụgwọ na akaụntụ gị. Ozugbo i mechara, ị nwere ike zụọ ya na narị narị mkpụrụ ego ndị ọzọ - dị ka Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash, EOS, ma ọ bụ Stellar. Mgbe a bịara n'ịwepu uru gị, a ga-akpọ ihe niile na cryptocurrencies.
Ugbu a, ọ bụrụ na ịchọrọ iji azụmaahịa ego dị ka Ethereum zụọ ahịa dịka USD, nke a na-abụkarị nsogbu karịa mgbe ị na-eji mgbanwe mgbanwe cryptocurrency. Nke a bụ n'ihi na ikpo okwu agaghị enwe ike ịchekwa USD belụsọ ma a na-achịkwa ya. N'ọtụtụ ikpe, ndị na-achịkwa mba na-ala azụ ịnye ikikere maka mgbanwe mgbanwe cryptocurrency.
Ka o siri dị, ọ ga-adị mkpa na ị ga-azụ ahịa Ethereum gị megide cryptocurrency nke agbado na USD - dịka Tether. Ọzọkwa, mgbanwe mgbanwe a na-achịkwaghị achịkwa enweghị ike ịnabata nkwụnye ego n'ụdị ego fiat, yabụ ị gaghị enwe ike iji ego na usoro ịkwụ ụgwọ kwa ụbọchị.
Trading Ethereum na CFD Broker
Anyị ga-atụ aro ka ị tụlere uru onye na-ere ahịa CFD na ịchụso saịtị azụmaahịa Ethereum. Nke mbu, ndi na-ere ahia CFD gha edozi ya. Mgbe ikpo okwu nyere ikikere site na ipele-otu aru dika FCA, ASIC, ma ọ bụ CySEC - ị ga-erite uru site na ọtụtụ ihe nchebe.
Nke a gụnyere ihe achọrọ iji debe ego ndị ahịa na akaụntụ akụ dị iche na nke ya. N'otu aka ahụ, ndị na-ere ahịa ego CFD nke edobere nwere ikike ịnabata nkwụnye ego na nwepu ego na ụzọ ịkwụ ụgwọ n'ezie. Nke a pụtara na ị nwere ike ịnweta ego n’elu ikpo okwu site na kaadị debit / kaadị, akaụntụ akụ, ma ọ bụ obere e-wallet dị ka Paypal.
Site na ahia Ethereum CFDs, nke a putara na ị gaghị enwe ngwá ọrụ dị n'okpuru. Ma, nke ahụ ọ dị mkpa? N'ụzọ dị oke mkpa, ị ka na-azụ ahịa Ethereum megide cryptocurrencies ndị ọzọ, n'otu oge ị ga-enwetakwa ohere ịbanye na crypto-to-fiat ụzọ abụọ dịka ETH / USD. Ka anyị na-ekpughe na ngalaba na-esote, ị ga-enwe ike itinye ihe ntinye ego, ma na-ere obere oge Ethereum megide USD.
Leverage na ire ere dị mkpụmkpụ
Mgbe ị na-eji mgbanwe mgbanwe mkpuchi ọdịnala, ọ bụghị naanị na ọ ga-esiri gị ike itinye ego na usoro ịkwụ ụgwọ kwa ụbọchị, mana ị ga-agbasi mbọ ike ịnweta ngwa ndị nwere ọkaibe. O doro anya, ihe dị ka BitMEX na-enye ndị nkwekọrịta crypto, mana ikpo okwu na-arụ ọrụ n'ụzọ a na-achịkwaghị achịkwa, ma 'na-eche echiche' dabere na Seychelles.
Dị ka ndị dị otú a, ọ bụrụ na ịchọrọ nhọrọ nke itinye leverage na ire ere Ethereum, a gwara gị ka ị jiri onye na-ere ahịa CFD achịkwa.
Leverage bụ usoro ịzụ ahịa na ego karịa karịa na akaụntụ gị. Nke a na - enye gị ohere ime ka uru gị dịkwuo elu, ebe ọ bụ na uru ị ga - enweta ga - aba ụba. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na itinye iwu izu ịzụta ihe ruru $ 1,000 na ETH / USD na ntinye nke 5x, a ga-eji azụmaahịa ahụ dị ihe dị ka $ 5,000.
N'okpuru ebe a bụ ihe atụ nke ụdị azụmaahịa Ethereum nwere ike ịdị.
Na-etinye $ 1,000 ịzụta iwu na 202.50
Na-etinye mpempe akwụkwọ nke 10x
Mgbe e mesịrị na ụbọchị ahụ, ETH / USD na-abawanye ruo 208.40
Nke a na - arụ ọrụ na uru nke 2.91%, yabụ ị kpebiri imechi ahia na uru
Nkịtị, gị $ 1,000 osisi na 2.91% gaara eme gị a ngụkọta uru nke $ 29.10. Agbanyeghị, ka itinye ntinye aka na 10x, nke a na - abawanye uru gị na $ 290.10.
N’akụkụ tụgharịa, ịzụ ahịa Ethereum nwere ike ịdị oke egwu, ebe ị nwere ohere ịhapụ ‘oke’ gị. Oke dị ka nkwụnye ego nke onye na-ere ahịa na-achọ gị mgbe ị na-etinye ego. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na itinye ntinye nke 4x na nguzozi $ 100, ị na-azụ ahịa na $ 400. Dị ka $ 100 pụtara 1/4 nke $ 400, nke a pụtara na oke gị bụ 25%.
Dị ka ị ga-ahụ site na ihe atụ dị n'okpuru, ị na-akwụ ohere ịnweta ego nkwụnye ego gị ma ọ bụrụ na ahia ahụ na-emegide gị site na otu ego.
Place na-etinye a na-ere iji na 41.50
You na-etinye mpempe akwụkwọ nke 4x, akụkụ gị bụ $ 250 (25%)
Nke a pụtara na ị na-ere ahịa na $ 1,000
Ọ bụrụ na ọnụahịa nke BTC / ETH gbadara site na 25% (31.12), mgbe ahụ ahịa gị ga-agba mmiri
Nke a pụtara na ahia na-akpaghị aka na-emechi na ore ahia na-gị oke. Na nke ugbu a, oke dị $ 250.
Nanị ụzọ ị ga - esi zere ịbụ mmiri mmiri bụ itinyekwu ego na akaụntụ oke azụmaahịa Ethereum gị. N'ọtụtụ ọnọdụ, onye na-ere ahịa na ajụjụ ga-agwa gị mgbe ị na-abịaru nso mmiri mmiri, nke ga-enye gị nhọrọ nke ịbawanye oke oke gị.
Ere Dị mkpụmkpụ
Ndị na-ere ahịa CFD echebere na-enye gị ohere ịmelata cryptocurrencies dị ka Ethereum na ịdị nfe. N'ime ime nke a, ị na-atụgharị uche na uru Ethereum na-agbadata n'ihe metụtara USD. Ọ bụrụ na ọ dịrị, ị ga-enweta uru.
N'okpuru ebe a bụ ihe atụ nke otu esi arụ ọrụ:
Ọnụ ego Ethereum bụ $ 240.00
Are na-akwụsi ike na ọrụ ahụ, yabụ ị kpebiri itinye iwu ire ere na ETH / USD
Mkpokọta osisi gị bụ $ 2,000
Fewbọchị ole na ole ka e mesịrị, ọnụahịa Ethereum na $ 190.00, nke pụtara na ọ funahụla ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 20% megide USD
Dị ka ndị dị otú a, ị kpebiri itinye ego na uru gị site na ịtụkwasị ihe ịzụta
Dịka nke dị n'elu, site na mkpụmkpụ Ethereum megide USD na mkpokọta osisi nke $ 2,000 - ọnwụ 20% mere ka ị nweta $ 400 na uru.
Ego ahia Ethereum
Saịtị ịzụ ahịa Ethereum ga na-akwụkarị ụgwọ ụdị ụfọdụ, yabụ ọ dị oke mkpa na ị ghọtara ego ole ị ga-akwụ tupu ịdebanye aha. Ọ bụ ezie na usoro ọnụahịa akọwapụtara iche ga-adị iche site na onye na-ere ahịa na-agbanwe, n'okpuru ebe anyị depụtara ụgwọ ndị kachasị mkpa ịkwesịrị ịme.
??? Gwọ nkwụnye ego / ndọrọ ego
Sitesfọdụ saịtị ntanetị Ethereum ga-akwụ gị ụgwọ iji nweta ego na ịpụ n'igwe. Iji maa atụ, ihe dị ka Coinbase na-akwụ onye nwere 3.99% iji debit ma ọ bụ kaadị kredit.
Nke a ga-abụ ego nke $ 39.99 na nkwụnye ego $ 1,000. Nke a dị nnọọ iche na nyiwe dịka eToro, nke na-enye gị ohere itinye ego n'efu.
N'otu aka ahụ, ụfọdụ saịtị azụmaahịa Ethereum ga-akwụ gị ụgwọ iwepụ ego, yabụ lelee nke a tupu ịmepe akaụntụ.
??? Isslọ ọrụ ahia
Imirikiti nyiwe azụmaahịa Ethereum ga-akwụ gị ụgwọ ọrụ azụmaahịa. Ọ bụrụ na ha emee, a na-akwụ ụgwọ ya oge ọ bụla ị mepere na mechie ọnọdụ. Iji maa atụ, Coinbase na-ebo kọmịị nke 1.5% ụgwọ na ego ngụkọta.
Nke a pụtara na iwu ịzụta $ 500 na Ethereum ga-efu gị $ 7.50. Ọ bụrụ n ’i rere Ethereum gị mgbe ọ ruru $ 800, nke a ga-efu gị $ 12 na kọmpụta mgbe ị mechiri ọnọdụ ahụ.
Structuredị ọnụahịa dị otú ahụ dị oke ọnụ, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị bụ ụdị onye ahịa na-enwe mmasị itinye iwu nke iwu.
The mgbasa bụ ego ọzọ metụtara azụmaahịa ịchọrọ ịkwado. Maka ndị na-amaghị, nke a bụ ihe dị iche na nzụta na ire ego nke ihe onwunwe. Oghere dị n'etiti ọnụahịa abụọ ahụ na-eme ka o doo anya na ndị na-ere ahịa na mgbanwe na-enweta uru mgbe niile - n'agbanyeghị agbanyeghị ụzọ ahịa si aga.
Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na ị na-azụ ahịa ETH / USD. Ọ bụrụ na ndị Buy price ma ọ bụrụ na $ 203, na ndị na-ere price bụ $ 200, a pụtara a dị iche nke 1.47%. N'okwu Layman, nke a pụtara na ọ dị mkpa ka ị nweta uru nke 1.47% naanị iji mebie.
N'ezie, ọ bụrụ na onye ị họọrọ na-ebubo ebubo ọrụ azụmaahịa, ị ga-emekwu ihe iji kpuchie mgbasa.
??? Ego na-akwụ ụgwọ abalị
Finangwọ ego abalị na-adị oke mkpa iji chọpụta tupu ịbanye na saịtị azụmaahịa Ethereum. Nke a bụ ego onye na-akwụ ụgwọ na-akwụ ụgwọ mgbe ị na-etinye ihe leverage ma ọ bụ na-ere obere ihe. Ka ị na-eji teknụzụ na-agbazinye ego n'aka onye na-ere ahịa, ebubo a dị ka ọmụrụ nwa.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-azụ ahịa $ 10,000 ruru ego a na-akwụ ụgwọ, na ego ego ị na-ahụ n'abalị bụ 0.05%, ị ga-akwụ ụgwọ nke $ 5 maka ụbọchị ọ bụla ị ga-emeghe ọnọdụ ahụ. Dị ka ọ dị, nke a agaghị abụ nsogbu ma ọ bụrụ na ị na-achọ ịzụ ahịa na obere oge, n'ihi na ụgwọ ahụ nwere ike ịbụ nkeji.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị mepee azụmaahịa a na-akwụ ụgwọ maka ogologo oge, ọnụ ahịa ya nwere ike ịmalite ngwa ngwa ịgbakwunye.
Iji chọpụta otu ụzọ ahịa ndị ahụ ga-aga, ị ga-achọ iji ọtụtụ ngwaọrụ nyocha. Ọ bụrụ na i meghị, ị na-azụ ahịa kpamkpam. E nwere ụzọ nyocha abụọ dị mkpa gbasara azụmaahịa Ethereum - nyocha ọrụ aka yana nyocha dị mkpa.
Nyocha teknụzụ bụ usoro ọgụgụ eserese. Will ga na-ele anya n'usoro ịnye ọnụahịa nke akụkọ ihe mere eme, yana etu usoro ndị a siri metụta ugbu a price edinam nke ụzọ. O nwere ike were ọtụtụ ọnwa, ma ọ bụrụ n’abụghị afọ ịghọta nke ọma otu esi agụ chaatị dị iche iche. Dị ka ndị dị otú a, ịkwesịrị ịrara oge dị ka ike kwere gị n'ịmụ ọrụ aka gị.
Iji nyere gị aka n'okporo ụzọ ahụ, ndị ahịa nwere oge ga-eji ihe ngosi nka eji arụ ọrụ nke ọma. Ndị a bụ ngwaọrụ ị na-enye gị ozi gbasara omume dị ugbu a nke ndị ị họọrọ. Nke a gụnyere ihe amasị nke RSI, Bollinger Bands, na MACD. Ihe nchoputa nka na ụzụ na-elele ọtụtụ usoro, dị ka ọnụ ahịa azụmaahịa, nkwado na usoro nkwụsi ike, volatility, yana ma ejiri akụ ma ọ bụ buru ibu karịa.
Site na nke a ka ekwuru, ụzọ dị mkpirikpi na ngalaba nyocha teknụzụ bụ iji ọrụ mgbaàmà cryptocurrency zuru oke. Nke a bụ ebe ị na-enweta ezigbo oge mata mgbe ihe ngosi ntanetị gosipụtara ọrụ ohere ịzụ ahịa. Dịka ọmụmaatụ, ọrụ ọrụ mgbaàmà na-akpaghị aka Mụta 2 Trade ga-enye gị ụzọ ịzụ ahịa a kapịrị ọnụ (dịka ọmụmaatụ ETH / USD), akara mgbaàmà amatala, yana iwu ntinye na ụzọ ọpụpụ dị mkpa itinye.
Nnyocha nyocha anaghị etinye uche na eserese ọnụahịa ma ọ bụ ọnọdụ. N'ụzọ megidere nke ahụ, ọ dabere na akụkọ akụkọ ụwa nke nwere ike imetụta nduzi nke ndị ahịa azụmaahịa n'ọdịnihu. Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na Ethereum guzobere mmekọrịta na nnukwu ụlọ ọrụ na-acha anụnụ anụnụ.
Dika nke a bu ezigbo ozi oma banyere oru ngo a, o yikariri ka onu ahia nke ETH ga abawanye na ahia. N'otu aka ahụ, ọ bụrụ na SEC kwadoro ahịa n'ọdịnihu nke Ethereum, ọzọ, nke a ga-enwe mmetụta dị mma na ọnụahịa nke ETH.
N'ụzọ dị oke mkpa, nyocha bụ isi dị mfe nghọta karịa nyocha teknụzụ, dịka n'ọtụtụ ọnọdụ ọ dị mma n'ụzọ kwụ ọtọ iji chọpụta ma akụkọ ahụ ọ dị mma ma ọ bụ na-adịghị mma.
Etu esi etinye iwu Ethereum?
N'agbanyeghị ụdị akụ ị na-eme atụmatụ ịzụ ahịa Etheruem megide, ị ga-etinye iwu na onye na-ere ahịa n'ịntanetị. Dịka, enwere ọnụọgụ metric dị mkpa ka a tụlee iji hụ na ikpo okwu maara ihe ọ na-amasị gị iru.
Zụta / Ree Order: Nke mbu, ikwesiri ịkọwapụta ma ịchọrọ ịtụ ahịa ịzụta ma ọ bụ ire ere. Ọ bụrụ n’echiche na ụzọ ego ga-abawanye na uru, họrọ maka iwu ịzụta. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na i chere na ụzọ ahụ ga-agbada na uru, tinye usoro ire ere.
Ọdụ: Na-esote, mgbe ahụ ịkwesịrị ịbanye ọnụ ọgụgụ zuru oke nke ịchọrọ itinye n'ihe egwu na ahia. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịzụ $ 500 na usoro ịzụta BTC / ETH, tinye $ 500 n'ime igbe dị iche.
Ordergba Iwu: Y’oburu n’inwe ikike ịgba, ighaputa onu ahia ole ichoro ime n’ahịa. Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na ọnụahịa ETH / USD dị na 206.23, mana ịchọrọ itinye iwu nzụta mgbe ọnụahịa gbadara na 204.00. N'ime ime nke a, a gaghị eme iwu gị rue mgbe ebutere ọnụ ahịa akpata 204.00. Usoro ahụ ga-arụ ọrụ ruo mgbe nke a mere, ma ọ bụ ị kagbuo ya.
Iwu ahịa: N'aka nke ọzọ, ịhọrọ maka usoro ahịa ga-ahụ na ị ga-enweta ọnụahịa ọzọ dịnụ. Nke a nwere ike ịdị elu ma ọ bụ n'okpuru ọnụahịa ahịa ugbu a.
leverage: Ọ bụrụ n’ịchọrọ itinye ihe nkwụnye ego n’ahịa Ethereum gị, nke a bụ ebe ịkwesịrị ime ya. Ozugbo ị họrọ akara nke ịchọrọ itinye, nha mkpokọta gị ga-emelite. Ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị banyere $ 500 dị ka gị osisi, na ị họrọ leverage nke 5x, gị Buy iji ga-abụ ihe ruru $ 2,500.
Nkwụsị-Ọnwụ: Kwesịrị ị na-edebe iwu nkwụsịtụ mgbe ị na-azụ ahịa Ethereum. Nke a na - enye gị ohere imebi ihe egwu gị ma ọ bụrụ na ahịa ahụ emegide gị. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịtọọ nkwụsị gị na ETH / USD na 202.12, na ọnụahịa ahụ na-akpalite, a ga-emechi iwu gị na akpaghị aka.
Were-Uru: Iwu na-enweta uru na-enye gị ohere ịgbachi uru ị na-enweta na akpaghị aka. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịtọọ ọnụahịa-uru-ego gị na ETH / USD gaa 210.00, ma ọnụahịa ahụ na-akpalite, a ga-emechi ahịa ahụ.
N'ikpeazụ, tinye usoro gị iji mezue usoro ahụ.
Họrọ Saịtị Ethereum
Iji zụọ ahịa Ethereum n'ịntanetị, ị ga-eji usoro ntanetị. Site na ọtụtụ puku mgbanwe cryptocurrency na ndị na-ere ahịa n'ịntanetị ugbu a na-arụ ọrụ na mbara igwe, ịmara saịtị ịdebanye aha nwere ike ịbụ ihe ịma aka.
Dịka, n'okpuru ebe a, ị ga-ahụ ọtụtụ ọnụọgụ dị mkpa ịchọrọ ịtụle tupu ịmepe akaụntụ.
Dịka e kwuru na mbụ, ọ dị ezigbo mkpa ịrapara na saịtị azụmaahịa Ethereum ndị a na-ahazi. Anyị na-ahọrọ nyiwe nke ndị ikike dịka FCA, CySEC, na ASIC nyere ikike. Nke a bụ n'ihi na ị ga-erite uru site na ọtụtụ usoro nche - gụnyere nke nkewapụrụ iche na akaụntụ akụ.
Ọ bụrụ n’ikpebie iji mgbanwe mkpuchi adịghị agbanwe agbanwe, ego gị nọ n’ihe egwu. Mee elu mee ala, ọ bụrụ na agbachiri ikpo okwu a na-ekwu okwu, enwere ike zuru mkpụrụ ego gị. Ihe a emeela ugboro ugboro na mbara, yabụ mgbe niile họrọ saịtị azụmaahịa Ethereum.
??? Nkwụnye ego na ndọrọ ego
ị mgbe ahụ ị kwesịrị iche echiche banyere otu ị bu n'obi isi nweta ego na saịtị azụmaahịa Ethereum. Ọzọkwa, mgbanwe mgbanwe cryptocurrency na-akwado naanị nkwụnye ego na mwepu n'ụdị mkpụrụ ego dijitalụ. Kama nke ahụ, ndị na-ere ahịa CFD na-achịkwa na-anabata ọtụtụ usoro ịkwụ ụgwọ kwa ụbọchị.
Nke a na-agụnyekarị debit / kaadị akwụmụgwọ, akaụntụ akụ, na e-obere akpa dị ka Paypal, Neteller, na Skrill. Dị ka akụkụ ederede, ị kwesịrị ịlele iji hụ ihe nkwụnye ego kacha nta dị na saịtị ịzụ ahịa Ethereum ị họọrọ.
Ebe nrụọrụ ahia Ethereum niile na-akwụ ụgwọ ego, yabụ nyochaa ego ole ị ga-akwụ tupu ịdebanye aha. Dika anyi kpuchitere na mbu, nke a nwere ike ibido site na nkwụnye ego / nkwụghachi ụgwọ, tradinglọ ọrụ azụmaahịa, ụgwọ ego abalị, yana n'ezie - mgbasa. N'ime ụwa zuru oke, ị ga-eji onye na-ere ahịa na-enye ọrụ na-enweghị ọrụ na mgbasa ozi siri ike.
??? Ụkwụ na-akwado
I kwesịkwara ịchọpụta ihe akụ ị nwere ike ịzụ ahịa megide Ethereum. Ọ bụrụ n'ị na-achọ ịzụ ahịa Ethereum megide ego ego, ọ kachasị mma ịrapara na ETH / USD. Nke a bụ n'ihi na ị ga-erite uru site na nnukwu mpịakọta azụmaahịa na mmiri mmiri ma e jiri ya tụnyere ego ndị ọzọ.
Mgbe ọ bịara ịzụ ahịa Ethereum megide mkpuchi ndị ọzọ, lelee iji hụ ụdị mkpụrụ ego nke onye na-ere ahịa na-akwado. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-azụ ahịa na-akwado nnukwu ego dijitalụ dị ka Bitcoin, Ripple, na Bitcoin Cash, enwere ike ịbịa oge ebe ịchọrọ ịzụ ahịa Ethereum megide akara ERC-20.
??? Ngwa Nchọpụta
You'll ga - achọ iji ngwa ahịa Ethereum na - enye gị ohere ị nweta ọtụtụ ngwa nyocha. Nke a kwesịrị ịgụnye ọtụtụ ngwa ọgụgụ eserese na njirimara teknụzụ, yana ịnweta ezigbo oge akụkọ dị mkpa. Ọ bara uru ma ọ bụrụ na saịtị azụmaahịa Ethereum na-enye ihe agụmakwụkwọ.
Ọ bụrụ n’inwe agụụ dị elu karịa maka ihe egwu, ị ga - ahọrọ otu onye na - ere ahịa n’ịntanetị na - enye ọghọm. Ọbụghị naanị na onye na-ere ahịa ga - ekpebi etu amamịghe a kapịrị ọnụ, kamakwa ọnọdụ gị.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị nọ na UK ma ọ bụ European Union, a ga-etinye gị na ntinye nke 2x mgbe ị na-ere Ethereum. Ọ bụ ezie na inwere ike inweta nke ọma karịa na mgbanwe na-enweghị usoro, ego gị nọ n'ihe egwu.
??? Nkwado Ndị ahịa
I kwesịkwara ịchọpụta ihe ọwa nkwado ndị ahịa na-enye saịtị ahịa azụmaahịa Ethereum. Easiestzọ kachasị mfe iji kpọtụrụ bụ site na nkata ndụ. Nhọrọ ndị ọzọ gụnyere email, yana n'ọnọdụ ndị na - adịkarịghị - nkwado ekwentị.
Ebe nrụọrụ ahia kacha mma nke Ethereum na nyiwe nke 2021
Havenweghi oge ichoputa ihe nyocha Ethereum n’onwe gi? N’okpuru ị ga - ahụ saịtị anyị dị ise kacha elu na 2021. A na-achịkwa ikpo okwu ọ bụla n’elu ikpo okwu, na-enye gị ohere itinye ego na kaadị debit / kaadị akwụmụgwọ, ma na-enye ọtụtụ ikpo ahịa Ethereum abụọ.
1. eToro - Ihe Nlere Ahia Ethereum kacha mma maka ndi n’ebido
Y’oburu na ibido n’uwa ahia ahia Ethereum, opuru ibu ihe kwesiri iji eToro. Ikpo okwu - nke FCA, ASIC, na CySEC na-achịkwa - na-enye gị ohere ịnweta ọtụtụ crypto-to-fiat ụzọ abụọ. Ọzọkwa, ikpo okwu na-enyekwa crypto-to-crypto ụzọ abụọ dị ka ETH / BTC. Naanị ezigbo ndị crypto dị maka ndị ọrụ US.
Ọ bụrụ n’ikpebie itinye itinye ego n’ọrụ ahụ, ma ọ bụ zụọ ahịa ya na cryptocurrency ọzọ, ị ga-akwụ ụgwọ obere ego. Ihe ikwesiri ime na eToro bu iji ihe eji eme ihe nke oma. Nke a na - enye gị ohere itinye aka na azụmaahịa nke ndị na - azụ ahịa cryptocurrency na - aga nke ọma.
Na-akwado ụdị kaadị akwụmụgwọ niile
75% nke ihe ndekọ ego ndị na-ere ahịa na-efufu ego mgbe ha na-azụ ndị CFDs na onye ọrụ a. I kwesiri ịtụle ma ị ga - enwe ike ibute nnukwu nsogbu nke idafu ego gị
Na nchịkọta, saịtị azụmaahịa Ethereum na-enye gị ohere ịzụta na ire cryptocurrencies dị mfe. Usoro a na - aru ​​oru dika ahia mbu, ya bu na ichoro ikwuputa ma uzo mgbanwe di ka ETH / USD na BTC / ETH ga - agbago ma obu ala.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-achịkwa mgbanwe mmekọrịta na-enweghị iwu, ozi ọma ahụ bụ na ị nwere ike ịzụ ugbu a Ethereum na onye ahịa CFD nwere ikike.
N'ime nke a, ọ bụghị naanị na ị ga-erite uru na usoro nchebe nke ahụ dịka FCA, CySEC, na ASIC, mana ị ga-enwe ike itinye ma wepụ ego na usoro ịkwụ ụgwọ kwa ụbọchị. Nke a bụ ihe mere anyị ji kwado usoro ntanetị nke Ethereum nke a na-achịkwa nke ọma.
Kedu ihe m nwere ike ịzụ Ethereum?
Nwere ike ịzụ ahịa Ethereum na ego fiat dị ka dollar US. I nwekwara ike ahia Ethereum megide cryptocurrencies ndi ozo dika Bitcoin, EOS, Ripple, na Binance Coin.
Enwere m ike ịzụ Ethereum na leverage?
Ee, ị nwere ike ịzụ ahịa Ethereum na leverage. Ọ bụrụ na ị na-eji onye na-ere ahịa CFD achịkwa, ị ga-etinye ego ole ị nwere ike itinye dị ka onye na-ere ahịa ahịa. Nke a guzo na 2x na UK na Europe. Ọ bụrụ na ị na-eji usoro ịzụ ahịa a na-achịkwaghị achịkwa, ị nwere ike ị gafere 100x.
Kedu ego nkwụnye ego pere mpe na saịtị azụmaahịa Ethereum?
Nke a ga-adịgasị iche dabere na onye na-ere ahịa. Ọ bụrụ na iji saịtị azụmaahịa Ethreum anyị dị elu Crypto Rocket, opekata mpe ego na-amalite naanị $ 50.
Kedu ihe bụ Ethereum CFD?
Site na ịzụta ma ọ bụ ire Ethereum CFD, ị ga-azụ ahịa cryptocurrency na-enweghị ịnweta akụ dị n'okpuru. Nke a pụtara na ị nwere ike itinye ihe nkwụnye ego, tinye aka n'ahịa dị mkpụmkpụ, na azụmaahịa na nnukwu ụgwọ ọrụ. Ndị CFD na-enye gị ohere ị nweta ego uru azụmaahịa Ethereum gị na pịa bọtịnụ.
Enwere m ike ịzụ ahịa Ethereum 24/7?
Ee, ahịa azụmaahịa Ethereum - yana cryptocurrencies niile maka okwu ahụ, mepere 24/7. Nke a adịghị ka ebe ọdịnala ọdịnala ọdịnala, nke na-emepe ụbọchị Mọnde-Fraịde n'oge elekere ọrụ.
Enwere m ike ịkọwa Ethereum?
Ee, ị nwere ike ịkpụlata Ethereum site na ịtụkwasị ahịa ere na ETH / USD. You'll ga-eme nke a site na CFD, yabụ lelee ụgwọ ego abalị.
Kedụ ka m ga - esi tinye ego na ebe a na - azụ ahịa Ethereum?
Ọ bụrụ na ị na-eji usoro iwu, ị ga-enwe ike iji debit / akwụmụgwọ ma ọ bụ akaụntụ akụ. Sitesfọdụ ụlọ ahịa Ethereum na-enye nkwado maka e-wallets.
Emelitere ikpeazụ: March 2nd, 2021